Semalt Expert Inopa 4 Mazano Okudzivisa Kubatwa NeRansomware
Kurwiswa kweRansomware kwakave kwakakurumbira mazuva ano nemakambani, hurumende, uye makambani aifunga kuti aiva nechokuchengetedza dhepfenyuro yenhepfenyuro yekurasikirwa nezviuru zvemadhora kune vanotengesa. Pano pane mazano mana ekudzivisa kugunzwa nerudzikinuro.
Cherechedza kuti mazano anotevera akataurwa naFrank Abagnale, nyanzvi kubva kune Semalt , anogonawo kukubatsira kuti ugare wakachengeteka kubva kuTrojans uye mavairasi.
1. Dzivisa kuvhara zvinyorwa zvingonyunyuta zve email
Vakawanda vevashandisi vanotumira email kune zvinangwa nechokubatanidza chinosanganisira ransomware kana trojan - poe-24-12. Kuzarura chibatanidzo chichangozviisa purogiramu yacho pakombiyuta yako kuitira kuti upe hurumende zvizere kutonga pa kombiyuta yako. Saka, usambobhura zvinyorwa zvinyorwa zvese zvekufungidzira kunyange kana iyo inotarisa yakafanana kune vamwe vako kana vezera.
2. Cherechedza mazamu aunosarudza pa
Waiziva here kuti imwe chete inonyanya kubudiswa kwe spammy inogona kuita kuti rudzikinuro rwugadziriswe pakombiyuta yako? Ndizvo chaizvo - zvizhinji zvemakambani akave akabatwa nekomborero munguva yapfuura bedzi aifanira kutora pachibvumirano chakanga chakaita sechinyorwa chete kuti apedzisire kurasikirwa nezviuru zvemadhora kuti vatsve. Nheyo yenyaya yacho ndeyokuti iwe haufaniri kudzivisa kutarisa chero humwe hukama hunowanikwa paIndaneti. Iwe hauzombozivi kuti chii chingave chiri kuvhara shure kwemaketeni achimirira kuti adye mari yako yakaoma yakawanikwa.
3..Tarisa paunotora software kubva
Kune zviuru zvemakambani ekufambisa software munyika nhasi. Zvinosuruvarisa, havasi vose zvavo vane mhosva. Vamwe vari mubhizinesi rekutengesa software yakaipa kune vatengi panzvimbo yekombiyiti software iyo inoshandiswa nemunhu. Kukanda nekugadzira software yakadaro kuchakurumidza kubudisa rudzikinuro pamakombiyuta yako nokudaro kuvhara zvose zvayo kusvikira iwe uchibhadhara chikamu chekuregererwa. Kuti uve parutivi rwakachengeteka, zvinokurudzirwa kuti utenge chete uye utore software kubva kune nzvimbo dzepamutemo uye dzine mbiri.
Zvinonyanya kukosha, ngwarira mahwendefa akasununguka uye akapwanyika e-premium software. Vakawanda vavo vanouya vachibatanidzwa nemapurogiramu evanhu vatatu vanogona kuchinjwa kuti vave rudzikinuro mushure mekunge maisa software. Adware inogonawo kuiswa pamwe chete nemapurogiramu akaputsika kana asina kusununguka.
4. Itai mari yakasimba anti-ransomware
Kuwedzera kwekuregererwa kwekudzikinura kwakakonzera makambani ekuchengetedza internet kuti akure zvakasimba anti-ransomware software iwe unogona kuisa pamakombiyuta yako kuti uderedze njodzi yekurohwa neye. Tsvakurudzo kuti uwane yakavimbika, yakasimba, uye yakavimbika anti-ransomware yaunogona kuisa pane kombiyuta yako. Iva nechokwadi kuti unomhanya cheko nguva nenguva mushure mekuisa iyo kuti uchengetedze kombiyuta yako kubva mumhando iyi yezvinotyisa software. Mukuwedzera, iva nechokwadi chokuti unozvidzorera nguva dzose kuti uwedzere kukwanisa kwayo kugadzirisa hurongwa huripo uye hwomunguva yemberi. Cherechedza kuti vatengesi vanobudisa zvishanduro zvesayenzi iyi yeIndaneti pamazuva ose.
Aya mazano mana achakuchengetedza kubva pakudzikinura. Iwe unofanirwawo kufunga nezvekuvandudza kushandiswa kwetsika yako sezvo makambani mazhinji anovandudza moto wawo wekudzima moto kuti aite kusakwanisa kuponeswa kuburikidza nerudzikinuro rwekuregererwa. Zvinonyanya kukosha, nguva dzose teerera mafaira ako pane diski yakaoma kana kuti gore kuitira kuti kana ukarwisa, unogona kuchinja kombiyuta uye uwanezve mafaira panzvimbo yekubhadhara rudzikinuro kune vakaipa.